Nzira yacho dropshipping: zvese nezve chii dropshipping - THE INDIAN FACE
KUTADZWA KWECHITSAUKO DROPSHIPPING: Zvese zvaunoda kuti uzive nezve dropshipping kugadzirisa bhizinesi rako reInternet.
E-commerce ndiyo iripo uye yemberi yemberi yekubudirira kwekutengesa yekutengesa kune ese marudzi ese zvigadzirwa nemasevhisi, pane izvo hapana mubvunzo. Kuwedzera kutengesa uye mafomu ekutumira chikamu chakakosha chekuti uwane kukura kwakanaka mubhizinesi rako reInternet, uye imwe yedzakanakisa nzira dzekuita izvi kuisa dropshipping kune yako bhizinesi muenzaniso.
Kana iwe uchiri kusaziva zvaari chaizvo nzira dropshipping saka ramba uchiverenga! Isu tinotsanangura zvese zvaunofanirwa kuziva nezvekudonha uye zvakanakira izvo zvinogona kutengwa nemhepo online yekutengesa uye yekutengesa.
Chii icho dropshipping uye inoshanda sei?
Iyo ndeimwe yeakanakisa online kutengesa masisitimu, sezvo mukana wayo mukuru kuponesa kwechitoro manejimendi nekutengesa zvigadzirwa. Iyi nzira yakasarudzika yekugoverwa kwezvigadzirwa zvinoenderana nekutengesa uye mairairo ezvitoro zvepa online anotungamidzana nevatengesi veboka rekunotengesa. Mune ino kesi, iyo online rechitoro chitoro chiri chete mukutengesa kutengesa yakagadzirwa uye kusimudzira kutengeserana pane internet, pasina kuti uise zvinhu zvairi kutengesa kana kutarisira kuendesa uye kutumira zvakafanana.
Nenzira iyi, iyo online shopu yekutengesa haishandisi zvinhu zvainotengesa, nekuti inotora mukana wechitoro, chekuchengetedza uye neparcel service yemunhu wechitatu, iye ndiye anopa uye kugovera iro rese catalog rezvigadzirwa aripo.
El dropshipping Iyo iri mhando yakapusa iyo inofambisa iyo yekutumira system yekutengesa kutenderera kutenderera pasirese. Muchidimbu, ndeye zvekugadzira iyo online shopu nemikana yekutengesa zvigadzirwa zve muparidzi dropshipping, pasina kuve chikamu chezvinhu zvekutengesa, chitoro che chengetedzo, kana sevhisi yepasita yekutakura kana kudzoka.
Nzira yacho dropshipping zvinoshanda?
El dropshipping Iyo yakanakisa bhizinesi yemhando yekutengesa nekutengesa paInternet uye inoshanda zvakakwana kana izvo zvinotevera zvinhu zvinomiririra zvinosangana nazvo:
Yako online shopu inongoenzaniswa neayo muparidzi dropshipping (mutengesi wechitatu-bato) uyo anopa zvigadzirwa uye zvinyorwa kutengeswa. Yayo chigadzirwa kabhuku inosanganiswa munguva chaiyo kune yayo stock, saka vatengi vako vanotenga zvigadzirwa zvavo pachikuva chako.
Mutengesi anotengesa zvigadzirwa mubhizimusi rayo repamhepo nemari yepasi, sezvo ichichengetedza michina yekugadzira, yekuchengetedza uye yekutumira; izvi zvinochengetwa na supplier dropshipping.
Iye mutengesi anongoisa mari mukuisa online chitoro (kana icho chisinawo chimwechete) zviri nyore pamapuratifomu akadai seIpopress kana Prestashop, nacho chinobatanidza nyore nyore zvigadzirwa zvese zvinopihwa ne supplier dropshipping kubudikidza nepuratifomu dropshipping kana ne CSV faira dropshipping ine ruzivo rwese rwekutenga.
El nzira dropshipping Zvinoda hunyanzvi hushoma hwehunyanzvi hwekuita basa iri, kunyange vazhinji vatengesi vangakutsigira mukugadzira chikuva chako kana usina. Iwe unofanirwa kugara uchichiita kuti chishande uye chengetedzwe zvakanaka kuitira kuti iwane kushanda kwakakwana. Mukuwedzera, iwe unofanirwa kushandisa yakarongeka ekushambadzira matanho ekuita kuti uone kutengesa kwakawanda.
Iye mutengesi achango shungurudza nezvekutengesa, kubhadharisa mutengi wekupedzisira, uye kubhadhara mutengesi zvichienderana nechibvumirano chakapfuura, kuti uchengete mutero wepfuma unobvumiranwa. Kana mutengi abhadhara mutengesi, mutengesi anofanira kubhadhara iwo muparidzi dropshipping muzana yemutengo wechinhu, uye kubva ikoko kunouya kupedzisira mari.
Maitiro ekutanga bhizinesi dropshipping?
Kunge chero bhizinesi, iwe unofanirwa kufunga zvakanyanya nezve zano reizvo iwe zvauri kuda kutengesa uye maitiro ekuzviita zvinobudirira. Mumba ma nzira dropshipping, iyo internet nekutaurirana ndiko kwako kwakanyanya kubatana. Kumhanya bhizimusi repamhepo rinobva pane dropshipping Izvo zvinosanganisira nekuchenjera kugadzirisa kutengesa nekutenga zviito pa internet mukubatana nemutengesi. Kana uchinge wafunga zvebhizinesi iri, tinokurudzira kuti iwe utevedze izvi matipi ekushanda kutanga bhizinesi rako zvichibva pane nzira dropshipping:
FAMILIARIZE WAKO NEMAHARA NEI INTERETIT BUSHESI
Izvo zvakakosha kuti iwe uwane chaizvo kuraira kwemaitiro omhanya uye yekuita internet bhizinesi. Zviri nyore chaizvo, asi unofanira kunge wakagadzirira. Tora mienzaniso yenyaya dzebudiriro kubva dropshipping pa internet uye tora zvakanakisa zvega zvega. Yako internet bhizinesi, kana iwe usingave unayo, inofanirwa kuve yakanyatso kusimbiswa. Kana uchinge uchinge uchinge unayo, unogona kubata vatengesi, kutaurirana zvigadzirwa kuti zvitengese, iyo mharidzo yemari, uye pamusoro pezvose, zvinoenderana neshoko rako chipatapata neicho cheiyo dropshipper yeichigadzirwa chinyorwa chekutsikisa nenzira kwayo pae-webhusaiti yako. kutengeserana, uye stock inovandudzwa munguva chaiyo.
ONGORA IZVO UYA Kutengesa uye NDIANI WAUYO KUTengesa KUTI
Rangarira kuti chinangwa chako ndechekutsvaga chigadzirwa chakanakisa dropshipping yevateereri vako! Dzidza musika uye sarudza kuti ndeupi mhando yeyako online shopu yaunoda kuve nayo. Sarudza yakatarwa soko niche uye utarise pazviri. Nenzira iyi, unogona kusarudza zvigadzirwa zvepamusoro-soro uye zvinhu zvekutengesa muchitoro chako chepamhepo nerubatsiro rweyako muparidzi dropshipping.
Tu mupi dropshipping Ichakubatsira iwe muhombe mbiri dzebhizimusi rako: pakutanga kwezvese kana iwe ukafunga kuvhura chitoro chepamhepo; uye kana iwe ukafunga kuti inguva yekuwedzera yako kateki katekiti, uye iwe unoda rutsigiro kubva vaparadzi dropshipping nekuti haugone kuburitsa uye kutumira zvigadzirwa uri wega. Joinha iyo vashandi dropshipping iyo inokodzera kwazvo zvaunoda!
TARIRA YAKANAKA DZEMUSORO (PROVIDER DROPSHIPPING)
El muparidzi dropshipping iyo yaunosarudza inofanirwa kuve nekukupa iwe uye zvigadzirwa uye izvo izvo zvawakasarudza kutengesa muchitoro chako chepa online. Unhu hwebasa rako reATC (revatengi sevhisi) zvinoenderana nehuwandu hwavo, saka mufananidzo wechiratidzo chavo nemukurumbira webhizinesi ravo unofanirwa kuve wakanyanya.
Tora mukana weinternet! Rangarira kuti yako yekutsvaga inofanirwa kusanganisira "mupi dropshipping (chigadzirwa chaunoda) ”. Semuenzaniso, tsvaga "supplier dropshipping gafas de sol" Mhedzisiro yekutsvaga iyi inokupa iwe sarudzo dzakawanda kuti usarudze kubva, asi pakupera kwezuva chinhu chakakosha ndechekutsanangudza tsananguro uye mabhenefiti avanokupa iwe kuti usarudze dropshipper inonyatsokodzera zvaunoda. Iwe unogona kugara uchibata navo kuti uwane rumwe ruzivo.
Wakanakisa wezvese wekudyidzana uchave unokupa iwe bhizinesi mamiriro ezvinhu, zvirinani purofiti muganho uye zvirinani zvekutonga uye zviri pamutemo mamiriro. Asi unoita zvese izvi nekugogodza pamusuwo chaiwo.
ADDED ADDED KUKOSHESA KWENYU YENYU STORE
Rangarira kuti zvigadzirwa zvinopihwa na vashandi dropshipping, asi iyo pamberi pevatengi yako chiratidzo, yako webhusaiti uye bhizinesi rako. Kumira kubva kune yakasara kwakakosha mune izvi uye chero bhizinesi repamhepo, saka iwe unofanirwa kubatanidza mune yako brand brand, kushambadzira mataipi anowedzera kukosha kune rako bhizinesi, semuenzaniso, mhando yemhando, zvidzikiso, basa revatengi, kuvapo mumasocial network, nezvimwe.
Uri kufarira kuita dropshipping? Bata iyo nyanzvi mukati dropshipping mune fashoni uye mitambo yemitambo, uye inosanganisira edu akasiyana ezvakawanda zvigadzirwa uye zvinyorwa mune yakasarudzika uye mitambo yemitambo fashoni kune runyorwa rwezvigadzirwa mudura rako repamhepo.
Kana uchida vashandi dropshipping magirazi uye chimiro chefashoni Zvebhizimusi rako repamhepo, taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve simba redu uye rekodhi yechigadzirwa.
Maitiro Dropshipping, imwe yemhando dzekuparadzira dzakashanda zvakanyanya mumakore gumi apfuura. Inogonesa vatengesi vepamhepo kubatana nemauto nevanozvigovera dropshipping vari kutarisira maqu